Part 1: Gịnị na-agbake Samsung Data?
Part 2: Official ụzọ - Samsung mgbake ngwọta
Nkebi nke 3: Best Samsung data mgbake --_ 1_698_1_ Dr. Fone maka Android
E nwere ọtụtụ kwere omume azịza nye ajụjụ a na ihe ndị kasị n'ụzọ kwụ ọtọ otu n'ime ihe niile bụ na data e furu efu ruru ka nke na ọ bụ biakwa obibia na onye ọ bụghị nanị naputa data ma na-emekwa ka n'aka na ihe bụ nsogbu mgbe chere ihu na nke a mgbe ọ na-abịa icheta ya. Ndị na-esonụ na-atọ isi na-akpata na-eduga data naghachi usoro na ya ngwa.
Ọ bụ mbụ nke na-eduga ná a nke na onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na data na-natara enweghị ihe ọ bụla na-egbu oge na n'ihu ọdachi. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na e nwere dị iche iche sub ngalaba na-abịa n'okpuru otu isiokwu na-eduga ná results na-apụghị ichetụ n'echiche na Ya mere data mgbake na Samsung-aghọ biakwa obibia. The data a na ma ehichapụ accidently ma ọ bụ na ọ bụ ihe ụfọdụ ụmụ mmadụ njehie usoro na-eduga ná mbipụta na nke a. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kwesịrị ekwesị ụzọ na-etinyere na nke a na-agaghị nanị iduga egwu results ma ga-emekwa ka n'aka na ihe bụ nsogbu mgbe mkpọ.
The igwe bụ pụrụ ịdabere na unreliable n'otu oge nke na-eme n'aka na ọ data na-echebe na adịghị na-echebe ka nke ọma. The isi ihe nke abụọ na-eduga ná data mgbake bụ eziokwu na e nwere ụfọdụ n'ibu kpatara na-eduga ná ọnwụ na ya mere mgbochi ndị mere dị mkpa na nke a. Nke a bụ oké ụdị data ọnwụ na-akpata nke na-eme n'aka na data bụ irrecoverable mgbe ụfọdụ ma n'ihi ọkaibe usoro ngwa ọ bụ n'ebe ọwụwa anyanwụ iji jide n'aka na nke na-kpebiri na nsogbu ahụ na-adị ASAP.
III. Ojiji nke na-ezighị ezi usoro
Ọ na-etinyere ihe dị iche iche na-eduga data ọnwụ. Mgbe ọ na-abịa Samsung mgbe ahụ isi kpatara nsogbu bụ eziokwu na data a na-depụtaghachiri ma ọ bụ bufee enweghị ihe ọ bụla kwesịrị ekwesị nhazi na Usoro nke na-eduga ná mbipụta na nsogbu. Ọ dị ezigbo mkpa iburu n'obi na onye ọrụ kwesịrị kwesịrị ekwesị ụzọ iji jide n'aka na nke na-adịghị na-ebilite na ọbụna mgbe ọ bụrụ na ọ bụ ikpe mgbe ahụ onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na nsogbu ahụ na-adị site n'itinye ọkaibe usoro.
Ọ bụ otu n'ime ndị isi na ala nke nkà ụzọ mee ka n'aka na nke na-adị n'ụzọ na-ihe ngwọta na-kụziri site pụtara nkà na ụzụ nke Samsung na nke a.
Gịnị bụ Samsung mgbake ngwọta?
Ọ nwere ike na-ahuta dị ka otu n'ime ihe ndị kasị mkpa na mkpa ngwa nke kwesịrị e iji jide n'aka na ihe bụ nsogbu kpebiri n'ihi na ndị ahịa na-eche ihu nsogbu nke data ọnwụ. Ọ bụ n'ebe ọ bụla Samsung laptọọpụ na kọmputa na Ya mere, ọ na-eme ka n'aka na draịvụ ike e weghachiri aga na na kwadoo version na nke a. The ọkaibe atụmatụ nke ngwa bụ egwu ma na naanị otu drawback na ngwa nwere ike ga-eji na Samsung usoro nanị dị ka ọ na ịnweta Samsung mgbake ebe naanị. Ọ bụ ihe na ebe n'ime Samsung ike mbanye nke dị n'ọgba na ndabere faịlụ na-mere e-akpaghị aka. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na ngwa na-eji na kasị mma n'ụzọ.
Download Samsung mgbake ngwọta
Ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ngwa na-ebudatara ma ọ bụrụ na ọ bụghị ugbua n'ebe n'ime usoro. Iji jide n'aka na ngwa na-ebudatara onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na URL-agbaso dị ka nke a bụ ihe kasị mma mgbake ngwọta nke Samsung na version na-emelitere iji jide n'aka na ihe kasị mma e ebudatara na nke a.
Olee otú iji Samsung mgbake ngwọta
Ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma ngwa usoro-agbaso nke mere na ọ bụghị nanị na nke a kpebiri ma onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ndị ọkaibe results na nke a. Na-esonụ bụ usoro na ga-agbasoriri iji nweta kasị mma na ndị ọkaibe results na nke a:
1. The ụzọ a ga-agbaso bụ Malite> All omume> Samsung mgbake ngwọta nke mere na interface-egosi:
2. The ọrụ mgbe ahụ kwesịrị ka pịa weghachi button iji jide n'aka na usoro ọganihu na nhọrọ nke isi weghachi a họọrọ:
3. Onye ọrụ mgbe ahụ kwesịrị ka pịa ọzọ bọtịnụ na usoro ihe omume ga-amalite na-arụ ọrụ na ya dị ka ọ na s onwe akpaghị aka:
4. The omume ga-ajụ Malitegharịa ekwentị ahụ na usoro ịrụ bụ isi weghachi nhazi:
5. The omume ga-ahụ na-eweghachite amalite:
6. The usoro a ga-restarted otu ugboro ọzọ iji jide n'aka na usoro na-okokụre:
Wondershare Dr.Fone for Android (Android data mgbake)
Ọ bụrụ na gị data e synchronized na ị hapụ ya, i nwere ike iji Wondershare Dr.Fone for Android. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma mgbake software dị na internet. Ọ bụghị nanị na naputa furu efu ma ọ bụ ehichapụ kọntaktị, ozi ederede, photos, WhatsApp ozi, ọdịyo faịlụ, videos na ndị ọzọ, ma ọ bụ nnọọ mfe iji kwa.
Gịnị bụ Wondershare Dr. Fone maka Android?
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma na ọkaibe oru ngo nke na-n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na ọ dịghị wuru na software chọrọ bụ n'ebe pacify onye ọrụ na nke a. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ na nke a kwesịrị ijide n'aka na ihe omume ahụ ibudatara na ukara website nke ụlọ ọrụ mere na version dị ọcha ma na emelitere. The URL bụ nke a ọ na-e nyere iji jide n'aka na onye ọrụ mgbe odụk hassle nke na-achọ usoro ihe omume na weebụ.
Download Wondershare Dr. Fone maka android
Iji jide n'aka na ihe omume ahụ ibudatara ebe a ka e kwuru n'elu na onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na exe faịlụ ebudatara arụnyere na na na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe nsonaazụ site na-agba ọsọ usoro ihe omume .Onye interface nke usoro ihe omume bụ dị ka ndị a:
Olee otú iji Wondershare Dr. Fone maka android
Usoro a ga-soro na nke a bụ dị ka ndị na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ọ na-soro na-enweghị awụgharị ọ bụla nzọụkwụ n'ihu n'ihu:
1. Onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na usoro ihe omume ebudatara, ulo oru na-agba ọsọ si URL n'ihu n'ihu:
2. Ozugbo ekwentị e jikọọ onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na USB debugging na-nyeere na enyemaka nke foto n'okpuru:
3. The ọzọ button kwesịrị-ahụ ga-enwe iji jide n'aka na ọ bụ ekwentị na nyochaa:
4. The onye ọrụ kwesịrị eme ka ahụ n'aka na faịlụ ụdị na Doppler mode na-ahọrọ:
5. The onye ọrụ kwesịrị eme ka ahụ n'aka na nke furu efu faịlụ na-nyochaa na ndị na chọrọ na-weghachiri eweghachi na-ahapụ ma ọ bụ tụfuo ndị ọzọ:
Na-atụ aro Video Formats N'ihi Galaxy Cheta 3
Nyefee égwu, SMS, Media, Kpọọ dekọọ, Kalinda & Ndi ana-akpo si HTC ka Samsung
Nyefee na Ndi ana-akpo si Nokia ka Samsung Galaxy S3
> Resource> Samsung> 2 ụzọ ime Samsung Data Recovery I Nwere Ịmata